Adeegyada Telefoonka iyo Internetka Oo Ka Maqan Qaybo Ka Mid ah Bosaso | SAHAN ONLINE
Adeegyada Telefoonka iyo Internetka Oo Ka Maqan Qaybo Ka Mid ah Bosaso
BOSASO;-Adeegyada Korontada, Taleefanada iyo Internetka ayaa maanta ka maqan xaafado ka mid ah magaalada Boosaaso oo ay ku jiraan wadooyin iyo xarumo halbowle u ah Ganacsgiga Magaaladda.
Arrintan ayaa timid kadib markii la jarjaray xargaha dabka iyo khadka internetka qaada ee mara wadooyin ay ka midtahay tan caanka ah ee hormarta Hotel Jubba, waxaana wadadaasi lagu arki karaa xargo taleefan iyo koronto oo dhinacyada wadada daadsan.
Dhamaan xargaha la jaray ee Koronto, internet iyo taleefan waa adeegii ay xaafadahasi siin jirtay Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis, inkasta oo aysan si rasmi ah uga hadlin Golis arrintan, hadana Fariin qoraal ah oo ay Mobile-ka dadka ugu dirtay waxaa ay Golis ku sheegtay in adeegyada maqan ay sababtay xargihii shirkadda oo ay jirtay shirkadda Korontada ee Enee, iyagoo ballan qaaday in ay adeegaasi dib usoo celinayaan dhakhso.
Masuuliyiinta degmada iyo Gobolka oo aan la xiriirnay waxaa ay sheegeen in arrintan lasoo wargeliyey balse illaa iyo hada ay wadaan baaritaan la xiriira sida wax u dhaceen iyo waxa laga yeeli doono.
Shirkadda Korontada ee Enne iyadu weli si rasmi ah ugama hadlin arrintan, balse saraakiil ka tirsan ENEE waxay u sheegeen Sahanonline in shirkadu ay u qorshaysan tahay in jarto xarkaha telefoonada iyo internetka ee ku xiran in ka badan 200 oo tiirarka korontada ee shirakadda ENEE. Shirkadu waxay jartay xarkihii ku xirnaa ilaa 50 tiir (baale) oo ku yaalay Wadooyinka Huruuse, Afcase iyo wadada dheer ee marta bartamaha magaaladda.
Boosaaso ayaa waayadan danbe waxaa uu tartan xaga korontada iyo adeegyada ah u dhexeeyey Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis iyo Shirkadda Korontada Bixisa ee Ennee. waxaana hore u dhexmaray isqabqasbi la xiriira tiirarka qaada xargaha danabeysan.
Wakaaladda Xooga Korontada Ummada ee ENEE oo La Asaasay 1989kii, waxaa shirkadu 100% ay dowladda Puntland ay leedahay, waaan shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega Korontada Magaalooyinka Bosaso iyo Qardho.
Shirkadda Isgaarsiinta Golis oo la asaasay sanadkii 2002kii waa shirkad ugu weyn ee bixisa Adeegyada Telefoonada iyo internetka, waxaa kaloo ay bixisaa Adeega Korontada magaalada Bosaso iyo Magaalooyin kale.